25 xiddigood oo aan danaynaynin xaaladda iyo gaadiidka dadweynaha!
Waxay helayaan Oscar iyo Grammy, roogga gaduudka ah waxay ku iftiimiyaan qurxinta kubbada iyo ugu yaraan tuxedos, iyo wadarta qiimaha ay ku dhammaato lix zeros, laakiin ... waxay doonayeen inay ku candhuufaan xaalada xiddigooda!
Haddii ay u baahdaan in ay tagaan dukaanka, booqo timo jaraha ama u kaxee cunuggooda dugsiga, ma kaxeynayaan darawal shakhsi ah, ma heli karaan limousine ama taksi VIP - waxay iibsadaan tikidh iyo raacaan gaadiidka dadweynaha!
Hadal ahaan, ma waxaad doonaysaa inaad ogaato magacyada 25 qof ee caanka ah ee aad si aad ah ugu kulmi karto mareenka? Sidaas halkan waa ...
Oo iyadu ma tihid ceebahan!
Marka la eego, wuxuu udub dhexaad u yahay Oscar iyo laba Golden Globes!
3. Jerry Halliwell
Tani, intaas waxaa dheer, sidoo kale ninkan billionaire ah iyo hogaamiyaha Red Bull Racing!
Iyo madaawada waxay u muuqataa mid aan ka xuneyn roogga gaduudka!
Waxaannu matalnaa wejiyada saaxiibbada la ...
Isku dheji, ma aaminsanayno indhahayaga!
7. Anne Hathaway iyo Adam Shulman
Taageerada ugu badan ee gaadiidka dadweynaha - taageerayaasha ayaa daawaday Ann iyo Adam subway dhowr jeer maalintii, mararka qaarkoodna waxaa jira gunno sida ...
Waa hagaag, halkan waa rakaab kale oo Oscar-ku guuleystay oo aan dareenin in aad aqoonsatay isaga ...
Sida isaga oo kale?
Haa, si aan ula kulmo Captain America, waxaan ka iibsan doonnaa kaarka safarka muddo sannad ah!
Oo hadday degdeg tahay?
Waa hagaag, waqtigan aynu u daacadno - ma yaabin!
Tani waa nolosha - maanta munaasabadda xaflada abaalmarinta Oscar, iyo berrito ee roodhiinka subaxdii ee subway.
Oo sidan ayaad u aragtay, sida Drew in gaadiidka dadwaynuhu uu rinjiyaynayo ciddiyihiisa!
Anagu ma aqoonsaneynin midkaba ...
Oo taajkii hortiisuu qummaati ugu dhacay;
Maya, indhahaagu ma khiyaaneeyaan ...
18. Cathy Holmes
Haa, waxay badanaa qaadataa Suri iyada!
Marka aadan rabin in aad soo daahdo munaasabadda ugu muhiimsan ee sanadka, kaas oo laguugu dhiibay in aad qabato ...
Laakiin tani waa wax la yaab leh!
Miyaad u maleyneysaa inay wali shaqo u heli karto?
Laakiin had iyo jeer foomka la yaab leh!
Waxaad u maleyneysaa, Oscar oo ka mid ah gurigiisa, haddii uu toogasho yahay macquul maaha inuu soo daahayo ...
Maanta waxaad leedahay hindhiso iyo koobab kamarado, iyo berrito mar labaad dhibaatooyinka maalin laha ah ...
Waxaa laga yaabaa in uu kugula taliyay walaasheed in uu tago tareenka ama si uu u helo fursado badan oo uu ku kulmo middaas - midka kaliya ee uu noqon doono nin sahlan, Jake, iyo maaha milkiilaha abaalmarinta ugu qiimaha badan.
11 xiddigood oo ka adkaaday kansarka
Isku-darka guud: jaangooyooyinka iyo nuqulkooda ay ku jiraan
Wax walba oo naga qarsoonaa: faahfaahinta arooska boqortooyada
15 xiddigood oo aan qarin waayo waxay adeegsadeen adeega hooyo ku meel gaadh ah!
19 sawir, ka dib oo aad rabto inaad noqoto Emma Watson
Halkee ayuu dhallinyaradu ka tagaa: 20 caan ah "kahor" iyo "kadib"
Taasi waa, ama 5 ka mid ah dhacdooyinka ugu naxariista badan ee aadka u daran!
19 sharciyo adag oo ay tahay in uu fuliyo Madaxweynaha Mareykanka iyo qoyskiisa
10ka ugu sarreeya ee ka soo horjeeda kooxdii "Viagra": sida ay u egyihiin iyo waxa ay hadda sameynayaan
12 xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan David Rockefeller
TOP-17 aroosyada dhalashada ee 2017, kaas oo aan xusuusan doono muddo dheer
14 xiddigaha Hollywood ee aan u imid Oscars
Qof kasta wuu qosliyaa: siduu Webka uga jawaabey bustaha Ronaldo?
10 caan ah oo qaateen kilo dheeraad ah si loo helo doorka
Habdhiska Oriental ee dharka 2013
Mucjisooyinka digirta Sovetka: 15 raashinka cuntooyinka caanka ah ee wakhtigaas
Waa maxay dhalmada cas ee macnaha jirka?
Duubka guga ee carruurta
Dumarka haweenka ah ee dharka la dhigo
Eldar oo lumay miisaanka
Dharka ugu casrisan
Sidee si guul leh u qaadataa sawir?
Keega farxad leh "Farxad Faransiis" - si toos ah ayuu uusajiyaa afka
Thyme yare - beerashada iyo daryeelka
Saladh iyo saladh tufaaxa
Coxarthrosis ee wadnaha isku dhafan - daaweynta
Mousetrap gacmo leh
Muxuu baro qoorta loola jeedaa?
Nolosha dhimashada ka dib - samada iyo cadaabta
Emma Bunton ayaa shaaca ka qaaday qarsoodi ah in ay la kulmayaan asxaabtooda Spice Girls
Dhuumaha nadiifka ah ee lagu nadiifiyo
Kabuubka faraha gacanta bidix
Nidaamka kabadhada leh sandblast